Ukusuka kwi-Excel ukuya kwi-AutoCAD, isishwankathelo sezona zilungileyo-iGeofumadas
Ikhaya/AutoCAD-AutoDesk/Ukususela kwi-Excel ukuya kwi-AutoCAD, isishwankathelo seyona nto
Ukususela kwi-Excel ukuya kwi-AutoCAD, isishwankathelo seyona nto
Ewe, ndimele ndivume ukuba kuye kumnandi ukuthetha ngalesi sihloko, ngoko kule post ndifuna ukubonisa okusemandleni esikufumene.
Sibone ukuba iMicrostation lidibene umsebenzi wokungenisa ngqo kwifayile ye-txt
Sibone kwakhona indlela yenze nge AutoCAD
Sibone indlela ukuthumela ngaphandle kwi-AutoCAD o I-Microstation kwi-csv okanye i-txt
Emva koko sabona indlela yokusebenzisa umyalelo ngqamana xa kunokuba kukho izikhokelo kunye nemida ekugqibeleni
Kwaye sabona Sicelo seVBA I-Microstation esebenza ngeendlela zombini
Kodwa okuhle konke ukufunda ngumntu othi izimvo zakhe sathetha ngalo esi sixhobo evumela ukusuka kwifayile Excel ukwenza ifayile DXF, kusetyenziswa uququzelelo ye x, y, z, i ikhowudi ukuchonga kwinqanaba apho sifuna ukuba idibene.
Isicelo sibizwa ngokuba yi-XYZ-DXF kwaye unako khuphela apha;
Makhe sibone indlela isebenza ngayo:
1 Imvelaphi yedatha:
Esi sicelo silungele ulwazi olukhutshelweyo kwi-gps okanye kwisikhululo esipheleleyo, ukuba uququzelelo luyi-UTM, oko kuthetha ukuba iiyunithi zalo kwinqwelomoya yaseCartesian zikwiimitha. Ikholamu yekhowudi yeyokuchonga inqaku, emva koko u-x, y, z ulungelelwaniso kwaye ekugqibeleni umaleko esifuna ukuba bazotywe kuwo, unokuba, umzekelo, i-axis yesitalato, imithi, imida, ipholigoni okanye naluphi na uphawu olusivumela kamva hluza idatha kwi-AutoCAD okanye kwi-Microstation.
* Wonke amanqaku kufuneka abe nekhowudi.
* Wonke amanqaku kufuneka angeniswe omnye emva komnye, ngaphandle kokushiya imigqa engenanto.
Ndiyabulela kuJuan Manuel Anguita, uMdwebi weTopograph ovela eJaén, eSpain owenze umzamo wokwakha le macro. Ifayile ye-Excel inamaphepha amathathu, elinye lawo elibizwa ngokuba yi-Preview likuvumela ukuba ubone igrafu kwimbono yesicwangciso, kunye nemibono esecaleni (eyakhelwe kwigrafu ye-Excel ecocekileyo!). Kwakhona nganye kwezi 9 quadrants inokujongwa, kwimeko yokutshintsha idatha kwitheyibhile iqhosha elithi "uhlaziyo lwemibono" lisetyenziswa
Qulunqa idatha yokuthumela ngaphandle
I Iphepha lesithathu ekuthiwa iinketho, wammisa ukuba ifayile uya kumazwe angaphandle uya kuhamba dimenciones ezimbini okanye ezintathu, ubungakanani bomgca, ukuba sifuna ezisezintabeni (eziphakamileyo) kunye negama lefayile DXF window ebonisiweyo.
Emva kokuba iqhosha elimfusa licinezelwe, ifayile ye .xx yenziwe, enokuvulwa ngeMicrostation, Arcview, AutoCAD okanye phantse nayiphi na inkqubo yeCAD. Kule nto, umaleko wenziwe kwisicatshulwa ngasinye esahlukileyo esifumaneka kwikholamu 'Yobeko' (umzekelo: lev), apho amanqaku aya kuba khona; Kuya kubakho omnye umaleko ogama lakhe liya kuba sisicatshulwa sekholamu 'Layer' + txt (ex: levtxt), apho iikhowudi ziya kuba khona, kwaye enye iyakwenziwa, apho ubukhulu buya kuba khona, negama 'umbhalo ikholamu 'Layer' + dimensions (ex: levcotas). Ifayile egqwesileyo enegama elifanayo kwindawo enye iyenziwa nayo.
Ifayili yokuya kuyo (dxf)
Lo ngumzekelo wefayile ejongwa kwi-AutoCAD. Emva koko unokutshintsha imibala yomaleko (ifomathi / iileya) okanye ifomathi yenqaku (ifomathi / izitayile zenqaku).
Sisicelo nje esinomtsalane, sokuba iluncedo kwaye kulula kangakanani ukuphatha. Ayizobi ​​imigca, ithumela nje amanqaku.
Google Earth kunye neNkqantosi yomhlaba, hlaziya idatha
BlockCAD, ukusikhumbuza nge-Lego
Ngo-AutoCAD kuphela, akunakwenzeka.
Unako, ukuba ungenisa itafile njengedatha kwiinguqulo ze-AutoCAD njenge-Civi3D.
Okanye ukuba wenza i-macro ne-AutoLisp enika itafile.
Wilmer Soto uthi:
Ndiyayixabisa ukuba ungandinceda ngophando lweetekisi kwi-autocad yeetafile ezigqwesileyo, zifumane kwaye zitshintshe umbala, ndiyathemba ukuba unako, ukubingelela.
Hipolito Rhodes uthi:
IXWAYO !!!! THANKA ..
Ndifumana impazamo eyi-1004 ngexesha lokubaleka….
Imbi ngokunyanisekileyo le macro ayiphelelanga kuba ayinakusetyenziswa izihlandlo ezininzi, kube kanye kuphela kwaye oku kuyenza ibephakathi okanye mhlawumbi ayinakusetyenziswa kodwa ndizamile ukwenza iifayile ezininzi kodwa ithi ifayile isetyenziswa yenye inkqubo ??? ?????
Sawuni Juan MAnuel
Ndandifuna ulwazi ukuze ndiqhube iprojekthi endiyenayo engqondweni kwaye ndafumana le fayile.
Ewe, andiyiyo ingcali ngokuqhubekayo, kodwa ndinengcamango yokuqhawula i-automation ye-geometric design of roads ngokusebenzisa i-editor ebonakalayo yomhleli.
Injongo kukubala izinto zejometri zeejika ezahlukeneyo kunye naloo maxabiso endiwafumana njenge-xls, ndiwaguqulele kwifomathi ye-ascii ukuze aphumeze kwiqonga le-cad kunye ne-microstation.
Kwaye apho ndikwazi ukuqhubeka, andazi ukuba ndingayenza njani. Ukusuka oko ndikubona unayo ingcamango eninzi kwaye mhlawumbi unokunceda
Ndingathanda kwakhona ukudala ikhowudi yokukhangela apho ndingayibona ngeso lengqondo i-curve kwisigcawu esiphezulu ngaphambi kokuthumela idatha kwiipulatifomu ezahlukeneyo.
Ingqalelo yakho, mbulela kakhulu
Kufuneka usebenzise imephu ye-AutoCAD okanye i-Civil 3D kule nto.
Ukuba ungenayo, sebenzisa inkqubo yokuvula njengeQGis okanye gvSIG
Ndiyazi ukuba akufuneki ukwenza ngoku ngqo nesi sihloko, kodwa ukuba umntu unokundikhokela ngendlela endinokuthumela ngayo iifayile ze-autocad kwi-KML kwaye ndibeke imidwebo kwi-gmaps.
akukho nto indixelela ukuba kufuneka ndiphoqe
Jose Cedeño uthi:
Siyabulela IZINTO KODWA KANYE KUPHELA luhamba UKWENZA Podro ngebhegi ENOBA OKANYE 2003 2007 EXEL ndinaye nam ezinye Iifomati EXEL AutoCAD NGAPHANDLE iphilile
Igalelo elihle kakhulu !! Ndifuna nje ukuba ufunde amanqaku angaphezu kwe-1000, ndiyabona ukuba ikhuselekile ... ndikwazile ukufumana amanqaku ukuya kuthi ga kwi-950, nangona kunjalo ndinolungelelwaniso lwamanqaku angaphezu kwama-5000 ... ngelishwa indixelela ukuba ndikhuselekile nge-password .. Kodwa igalelo elihle! Ndiyathemba ukuba umbhali uyakubona oku kwaye angalonyusa inani lamanqaku ukuze akwazi ukungena ..
Siyabonga kakhulu ngokusinika isicelo esihle kakhulu. Ndiyonwabile kakhulu ngomsebenzi, umbuzo: Ngaba kunokwenzeka ukudibanisa ibloko kunye nephuzu ngalinye, umzekelo isangqa? Ukuba kunjalo, unokundixelela ukuba yintoni indlela.
emihle kakhulu, oku ukusebenza kwee-Excel sheet, umbuzo ngokutsho iimvavanyo ndenze oku kuphela inani leendawo ekufuneka zenziwe igrafu, kwimeko yam kufuneka benze iigrafu points 4000 njengoko angenza ntoni ukutshintsha oku Excel yePivotTable njengoko Kuza kuthatha ixesha elide ukuba ndibe necebo lokucwangcisa.
Ndiya kuthumela halala wam onyanisekileyo nombhali, oko kuya kukunceda gqitha ukuba abahloli, banethemba ukuqhubeka ukubaxhasa abanjalo TECHNICAL AIDS ukuphuhlisa ngokwam ngendlela echubekileyo ngakumbi kwixesha elizayo.
U Lazarin uthi:
UDouglas ... kwi-AutoCAD kufuneka unike ifayile ivulekile,
kwifayile yeefayile ezikhethiweyo dxf
Ukhetha ifayile eyakhiwe ku-C kunye
Ukuba isebenza kwi-2007, xa uvula ifayile ibonisa isilumkiso sokhuseleko, kufuneka ukhethe kuyo
Nika amandla oku okuqukethwe kunye
Ukuba ubhekisa kwifayile ye-Excel eboniswe kumzekelo, xa sele ungenile ulungelelwaniso, cofa iqhosha elimfusa elinombhalo omthubi: “cofa ukwenza i-dxf”
Ndifuna ukwazi indlela yokuhambisa idatha esuka etafileni ngokugqithiseleyo kwi-autocad, yintoni umyalelo wokusebenzisa.
CARLOS MMM uthi:
Ndingathanda ukuba undincede ... ndizama ukufumana isicelo okanye inkqubo yesiqhelo kwi-lsp. Ungathumela ngaphandle iitekisi ukusuka kwi-.dwg ukuya kwi-.xls kuphela izicatshulwa ozikhethayo kunye nemouse kwaye kwangaxeshanye ukwazi ukufaka idatha kunye nebhodi yezitshixo ukuba kungabikho mbhalo kumzobo. kwaye izicatshulwa ezithunyelwa ngaphandle azikhethwanga ukuba ayindivumeli ukuba ndiyikhethe amaxesha ngamaxesha njengoko kufuneka.
Ndine le ndlela
(defun C: I-TXTOUT (/ vv vc vd vf vg vg); i-V1.0
; Ngo-Scott Hull, 11-20-86
; Imveliso ye-ASCII yokuthumela ifayile.
(i-setq iya (getstring "Igama lefayile ye-ASCII ukuyila:") vb (ivula iya "r"))
(ukuba (/ = = vb nil) (nxu lanisa (vv vb) (setq vc (ascii (cc
“Ifayile eneli gama sele ikhona.\_nNgaba ufuna ukuyibuyisela endaweni yayo? ")))))
(ukuba (= vc 89) (nxu lisela
(setq vb (vula va “w”) vd (ssget) ve (sslength vd) vf 0)
Andiyazi i-password, ikhuselwe ngumbhali. Kodwa ayikuthinteli ekukopeni iiseli
Ukukopisha uncamathisele ikholam lwe data kwi spreadsheet oku andixelele ukuba iiseli akhuselwe, hayi yintoni na isitshixo ukusombulula le ngxaki, ukuba uyazi ukuba ube nombulelo gqitha
Molweni zihlobo, ukuze nikwazi ukuyisebenzisa e-ofisini ngo-2007 kufuneka niyiguqulele kwinguqulelo, kwi icon ephezulu ngasekhohlo kukhetho, COFA u-ALLI. Emva koko uyinika ukuba yamkele. Xa uceliwe ukhetho lokuvala nokuvula incwadi, cofa u-YES. Iyakulumkisa ukuba utshintsho olungagcinwanga luya kulahleka, ayinamsebenzi, yamkelwe kuphela kwaye ngoku (ukuba olu khetho ALUVUMI, ngcono). Phambi kokusebenzisa i-macro kufuneka uqaphele apha ngezantsi kwimenyu yebar ukhuseleko ISILUMKISO: Eminye imixholo esebenzayo ikhubaziwe, YIYA KUZIKHETHA UZE UCOFULE Vumela lo mxholo kunye ne-voila…. UNOKUWUSETYENZISELA E-OFISI NGO-2007.
YENZA KONKE !!!!! (UNGAKHUMBI UKUBA UMSEBENZI WEMACRO KUFANELE UKUQHUBA NOKUBHALISA)
Ukuba uthetha ukupasa umxholo, khetha itekisi kwi-Excel, ikopi, uze u-AutoCAD, unamathisele
sergio villa uthi:
lungile njengoko bonke babuka kumbuzo wam kuku oku kulandelayo ukudlula i-fucking ephezulu, kwi-auto cad kodwa kwisicatshulwa?
Armando Alvardo uthi:
Ifayile entle kakhulu. Umbuliso kumhlobo oshiye le fayile, ukubona ukuba iminikelo engaphezulu ikhululiwe.
akudingeki uguqule, faka nje idatha.
Esi sicelo sikhuselwe ngephasiwedi, umbhali wenza
Molweni andikwazi kuguqula iinketho icela i password yokhuseleko ndingathini xa kunje?
Siyabonga kakhulu kubo bonke abenza oku kuphucuka.
Ndiyabona ndifuna indlela yokwenza i-polygon kwaye uyilungiselele kodwa kwi-arcgis.
Okokuqala, enkosi ugqogografi uJuancho nge-macro kunye nexhego! ukuyifumana nokupapasha ... yintoni igalelo elikhulu !!!!!
ifayile iyayenza c:
udalaphi ifayile ye-dxf
IJONY COLOMBIA uthi:
ESEBENZA IN OFISI 2007 akusoloko ME kum isiphoso UTHI kumazwe angaphandle ukuya ifolda CY nto iphuma ndifumana window ukuba PERUTRAR ungandixeleli into emandiyenze SDE
Uxolo, andiyazi ukuba kuya kuba yintoni
Enkosi ngempendulo yakho ekhawulezileyo, Galvarezhn. Ngelishwa ayizange isebenze.
Impazamo yokujonga kwangaphambili, kubonakala kum inokuba kungenxa yoqwalaselo lommandla, ukuba isahluli samawaka kunye nesiphelo (semicolons) sitshintshiwe, jonga ...
kubonakala kunomdla, kuba ku-intanethi; Ndiya kubona ukuba ndiyakwenza uhlaziyo olunye usuku lwalo
Ndifumene isicelo sewebhu samahhala sombhalo ukuya kutshintsho lwe-dxf
UKUPHATHA KWI-TEXT X, Y, ZA DXF (TOPOGRAPHY)
xa inqanaba lokuzithemba le-macro liqwalaselwe, i-spreadsheet nokho ibonisa kwakhona umyalezo wephutha kwisithuba sesibini (PREVIEW).
Nangona uqhubeka uthumela amaqaku kwi-dxf, ndingathanda ukunika ngokupheleleyo ukusebenza kwezi festile.
ukuqwalasela izinga lokuzithemba
uya kwiqhosha lokugqwesa, elokuqala phezulu ekhohlo, kwaye ukhethe iqhosha elithi "excel options",
emva koko ukhethe u-"trust center"
kwaye apho ukhetha "misela iziko lokuthembela"
emva koko ukhethe "useto lwemacro"
kwaye apho ukhetha "vumela zonke iimacros"
jose spain uthi:
Apho ndibeka khona inqanaba lokuzithemba kwi-2007 kakhulu
JUAN RAMON uthi:
Ndiyakuvuyela kwaye ndikuxelele ukuba isebenza kakuhle kwi-ecxel 2007 kuphela ukuba kufuneka uqulunqe ukuxhomekeka kwizinga lokuzithemba kwaye ulungele
I-OFICCE I-2007 AYISEBENZISI, UKUBA KUNYE NOKUPHENOMONI NJENGOMUNYE OTHINTILE ISICELO NO-UPDATES IT. KUTHANDA
kulungile, ke uye kutshintsha ukulungiswa kwendawo kumatshini wakho
qalisa / ukulawula ipaneli / isethingi sendawo
ngoko ukhetha ilizwe lakho kwiinketho zengingqi
apho qinisekisa ukuba amawaka-waka amahluli asekiwe ngesimboli "comma" kunye nedesimali ezine "dot"
ke uya kuhamba kwaye kufuneka usebenze
Isebenza ngaphandle kwedesimali …… kodwa apho ulungelelwaniso alunakuba luchane kwindiza… .. umququ, undicebisa ntoni ???
ufake zika rounded uvavanyo, okt ngaphandle idesimali ukubona ukuba ingxaki ayikho indawo (iziphumlisi kuba eyahlula amawaka kunye kwesishumi ngenxa yokuzahlula).
Ndingena kwii-nortes ne-eses idibene kunye nobukhulu kodwa akwenzi okokuqala
lishiya i mpazamo
Ixesha lokusebenza; '1004,:
akakwazi ukufumana isakhiwo se chart_bjects kwiklasi ye-worsheet
Ewe, kufuneka isebenze ngaphandle kweengxaki
Ngaba ndiya kulahleka into?
hi shaka, yiyiphi inguqulelo enayo?
i-macro ayisebenzi kum, unako ukunceda ???
yonke i-boloqueda kwaye sele ikhona isakhono ukuze ubuninzi be-macro bubuncinane banjenge g! ukuphawula, akusebenzi kum! !!!!! ndincede
Molo Marcos, inkqubo ivelisa umyalezo ongenakuluguqula utshintsho, kodwa ungalwamkela. Oko kukuthi, ungatshintsha igama lefayile kunye nobukhulu bombhalo, kwaye xa uyenza, velisa isiphumo.
Kwimeko apho uneengxaki ezininzi, musa ukutshintsha ubungakanani bombhalo okanye igama lefayile, akuyimfuneko. Ubungakanani bombhalo bunokuhlelwa kwi-autocad.
Sawu, ndizama ukusebenzisa le nkqubo ukupasa uphando olutshanje kwi-CAD, kodwa kwi-Excel yam ayivumeli ukuba ndiyitshintshe nayiphi na inokwenzeka kwiphepha lesithathu, ngaba le nto ingafanelekile? Siyabulela kwangaphambili.
Miguel: i-macro ayisebenzi kunye ne-Excel 2007
Joaquín: i-macros kufuneka inikwe amandla, oku kwenziwa kwizixhobo / macro / ukhuseleko kunye nokwenza ukhuseleko kwizinga eliphantsi.
iphepha lakho eligqwesileyo lihle kakhulu kodwa i-macros ukuba ispredishithi ayisebenziyo iya kukhubaza into endiyenza ukuze ndisebenze ngokuchanekileyo
Kuyindlela endiyisebenzisileyo ndiyisebenzise ixesha elide kodwa ndinenkinga enkulu:
Akusebenzi neofisi ye2007.
Ndiya kuxabisa nayiphina isisombululo kule ngxaki.
rafael amaiz uthi:
Ndiyifumana umdla kakhulu kwimisebenzi engekho enkulu, ndiza kuzama ukubona indlela isebenza ngayo
Sawubona Jordi, ngokunyanisekileyo andizange ndizame kwi-2007, ukubona ukuba ubani oye wazama apho kwaye uyaqinisekisa ukuba unika iingxaki
galvrezhn, kuqala, feliciarte ingqokelela usuke wena kwenziwa kolu ngeno, kwaye kwelinye icala (ngoko ubona kukho wayelikhoboka ngakumbi xyz-DXF, hehe) wayefuna ukuphawula ukuba umntu, nokuba wena, basiva macro Excel 2007, 5 kuba kwakufuneka ukulusebenzisa-6 iminyaka kwiinguqulelo yangaphambili ye-Excel, kwaye andazi kutheni, kodwa oko akuthethi ukubaleka (mna imacros zesikocan yenziwe, nabo bonke).